လဂွန်းအိန် | အရိုးရှင်းဆုံးအမှန်တရားအတွက်
လူနှင့်မျောက်တို့၏ ခြားနားချက်၊ကွာဟပုံတို့ကို သုတေသန လုပ်ရန် အတွက် ကုပ္မဏီကြီးတစ်ခုက သိပ္ပံပညာရှင်မည်သော အူကြောင်ကြား၊ငပျင်းကြီးတစ်ဦးအား ရန်ပုံငွေများပုံအော ပေးသည်ဟူ၏။ ထိုသိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီးလည်း အစပိုင်းတွင်နေ့ညမဟူ ကြိုးကုပ် ကာလေ့လာခြင်း၊ရှာဖွေထောက်လှမ်းခြင်းအမှုတို့ကို လုပ်ပါသော်လည်း ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများမှာ ရှေးဦးမစွကပင် အခြားအခြားသော ပညာရှင်အမည်ခံ အူကြောင်ကြားများက လက်ဦးမှုရယူ၍ရှာဖွေပြီးဖြစ်ရကား ကျွန်ုပ်တို့၏ လူပျင်း၊လူထူကြီးအတွက် အထွေအထူး ဖော်ထုပ်တင်ပြရန်မကျန်တော့ပေ။ သို့သော် ထိုကဲ့သိူ့အဖြစ်မှန်ကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြလိုက်
သည်ရှိသော် ပုံမှန်လေးရနေသော ရန်ပုံငွေ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ဖြတ်တောက်ခြင်းခံရမည်ဟူသောအတွေးလက်လက်ဖြင့် စိုသောလက်မခြောက်စေရန် အတွက်အရှည်ကိုရည်မျှော်လျက် ကုပ္မဏီ ပိုင်ရှင်တစ်စုအား …. “မိမိအနေဖြင့် အပူတပြင်း၊အပတ်တကုပ် ကြိုးစားသုတေသန ပြုကာနေလျက်ရှိပါကြောင်း၊မကြာမှီ ကာလတစ်ခုတွင် ချားလ်စ်ဒါဝင်၏ ဆင့်ကဲတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကောက်ယူချက်၊ နယူတန်၏ ရူပဗေဒ ဆန်းခေတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်၊ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိန်း၏ ပြန်လှန်ကျိုးကြောင်းစပ်ဆက်မှုသဘောဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့မှု များနှင့်မနီးယိုးစွဲ ကြီးကျယ်ခမ်းနားနိုင်သော ခေတ်သစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးတစ်ပါးနှင့် မိမိကြားတွင် အလွှာပါးလေးသာခြားတော့ သယောင်ယောင်”…. ညာရွှီး ချွေးသိပ်အချိုသပ်ကာချူနေလေတော့သည်။တစ်နေ့တစ်နေ့ ရုံးခန်းသို့လာကာ ကော်ဖီသောက်ခြင်း၊ လက်ထောက်များ အတင်းပြော၊ငြင်းခုန်သည်ကိုအကြီးအကဲတစ်ဦးအနေဖြင့် ဒိုင်အဖြစ်ခံယူကာဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း၊အချိန်တန်လျှင် နေ့လည်စာ၊ညနေစာတို့ကို အရန်သင့်ခူးခတ်စားကာ အာဟာရဖြည့်ခြင်း၊နေ့လည်နေ့ခင်းအချိန်များတွင် အင်အားဖြစ်စေရန် တစ်ရေးတစ်မောမျှခလောခေါ်အိပ်စက်ခြင်းစသည်စသည်တို့ဖြင့်သုတေသနလုပ်ငန်းကြီးကို အပြင်းအထန်လည်ပတ်လျက်ရှိရာ များမကြာသောကာလတစ်ခုအရောက်တွင်……
ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လိုက်ကျော် အူတူကြောင်တောင် ပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်အိပ်စက်ခြင်းမှနိုးလတ်သောခဏတွင် မိမိဖင်ညှောင့်ရိုးနေရာတွင်အမြှီးပေါက်စ လေးတစ်ခု ခုလုခုလု နှင့် နေရာယူပေါက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်းကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ရှာဖွေဖော်ထုပ်နိုင်လိုက်လေတော့သည်။ဥာဏ်အလွှာကို သေချာဖြတ်သုံးလေသော် လူနှင့်မျောက်တို့အကြား အလွန်နီးစပ်ပါလျက်မတူညီကွဲပြားရခြင်း၏ အရင်းအမြစ်ကို ထင်ရှားစွာ သိမြင်သွားလေတော့သည်ဟူ၏။ငှင်းမှာ အခြားမဟုတ် အလုပ် ဟူသော အရာပင်တည်း။လူတို့တွင် အလုပ်ဟူသောကိစ္စအ၀၀ တို့ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှခြေလက်မနားဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် အမြှီးဟူသောမလိုလားအပ်သည့် ရမ်းခါရမ်းခါ ပစ္စည်းမှာ မပေါက်ရောက်နိုင်(သို့မဟုတ်) ပပျောက်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ထိုမှဆန့်ကျင်ဖက်တွေးရသော်မျောက်ဟူသောသတ္တ၀ါကားအိပ်၊စား၊ကာမ ထိုသုံးဝ မှတစ်ပါးအခြားသော အလုပ်တာဝန်ဟူသည်စိုးစဉ်းမှ မထမ်းဆောင်ရကားအမြှီးရှိရခြင်း၏အကြောင်းတရားဟုယူသော်ရကောင်း၏ဟုဥာဏ်အလျင်တွင်ထင်လင်းစွာ တွေ့လေသည်။ထိုနောက် အချိန်စက္ကန့်မဆိုင်း ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ကြီးထံအရောက်လှမ်းကာ မိမိ၏ မဟာ့မဟာ တွေ့ရှိမှုကြီးကို ၀မ်းသာအားရ လေပေးရန် ချီလှမ်းလေတော့သည်။
နောက်ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်မည်သော လူကြီးမင်းရုံးခန်းပေါက်ဝ အရောက် တံခါးမခေါက်၊ခွင့်မတောင်းပဲ ၀င်လေရာ အတွင်းတွင် …လူတစ်ရပ်နီးပါးမျှအရှည်ရှိသော အမြှီးတစ်ချောင်းကို ခါးပတ်အဖြစ်ပတ်ကာဘောင်းဘီပြင်ဝတ်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည့် လူကြီးမင်း ကိုထင်ရှားစွာတွေ့လိုက်ရပါလေတော့သတည်း..။
သုံးသူအဖြစ်ရှိနေသောလူလတ်ပိုင်းတစ်ဦးထိုင်နေသောစာပွဲဝိုင်းလေးသို့ အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်ရှိလူရွယ်တစ်ဦး
အားမနာပါနဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားမျက်နှာကြီးကို ကြည့်ပြီးကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။နားရှုပ်တယ်ဆိုရင်ရှင်းပြရမှာပေါ့။
ရက်ပဲကျွန်တော့်ရှိတဲ့ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဗျာ။ (ေ_ာက်ရူး..။) ကျွန်တော်အရမ်းကို ရင်တွေခုန်ပြီး အရမ်းကို
ဆိုင်ရှင်ကနောက်ကလိုက်အော်၊ကျွန်တော်ကမကြား။ပြန်တွေးကြည့်တော့ရှက်စရာကြီးဗျ။ဟတ် .. ဟတ်။သူ
ထိုစဉ်..”ဟေ့..ဟိုမှာတွေ့ပြီ။ကားရပ်၊ကားရပ်..။ဟေ့..မပြေးနဲ့နော်..။..” အသံဗလံများနှင့်အတူ ဆေးရုံကားလို
ကားတစ်စီး”ကျွိ” ခနဲ ဆိုက်လာပြီး ကားပေါ်မှ လူနှစ်ယောက် ပြေးဆင်းလာကာ ပုံပြောသူလူငယ်ကို ဖမ်းလိုက်
ပါတော့သည်။လူငယ်လည်း…တစ်ဟီးဟီး..တစ်ဟားဟား ..တစ်ငိုငို..တစ်ရီရီ နှင့် ရုန်းရင်းကန်ရင်း လိုက်ပါသွား
လေတော့သည်။ နောက် ကားရှေ့ခန်းမှမျက်မှန်နှင့်လူကြီးတစ်ဦးဆင်းလာပြီးနားထောင်သူလူလတ်ပိုင်း
ထိုလူကို ..”စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ ..။ဒီလူက စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနာခင်ဗျ..။စိတ်ဖေါက်ပြီး
“အေးဗျာ..။ခင်ဗျားကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေတာကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ..။ ခုဘာ
“အင်း ..ဒါဆိုလည်း ..ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုက်လည်ပါဦးလားဗျာ..။ဟိုမှာ..မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းလေး
“ဟေ့ … လာကြဦး..။ဒီကျန်တဲ့တစ်ယောက်ပါခေါ်သွားမှရမယ်။ဒီကောင့်ကိုကြည့်ကြစမ်းပါဦး။နေကောင်း
ပေးပြီးလှည့်လိုက်တာ၊ဘွားကနဲကိုတန်းမိတော့တာပဲ။ ငါမသင်္ကာလို့အစ်ကြည့်တာ၊မိတာပဲ။ တစ်ခါတည်း
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်းရှိ ကောင်တာမှ အမယ်အိုကြီးသည် ထိုအဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ..ဟင်းကနဲ
သက်ပြင်းချကာငြီးလိုက်သည်မှာ..”သြော်..ဘုရားဟောများတယ်မှန်ပါလား။ လောကကြီးတစ်ခုလုံး အရူးတွေနဲ့အပြည့်..။အင်း..အင်း..။အနိစ္စ၊အနတ္တ၊ဒုက္ခ…”
……………………….. ……………………………. …………………………. ……………………………….
ဒါဝန်ကြီးချုပ်က စာသင်ကျောင်းမှာကလေးများနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံလိုကြောင်းပြောတော့ ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးများ
ချုပ်။ ။သားတို့စာသင်ရတာ အဆင်ပြေသလား…။
ကျောင်း(၁)။ ။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟာ အရာရာပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်ပါခင်ဗျာ..။
ချုပ်။ ။ သမီးလေးရော၊မေမေတို့က မုန့်ဖိုးမှန်မှန်ပေးလား။
ကျောင်း(၂)။ ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်။
ကျောင်း(၃)။ ။ဟုတ်၊အားလုံးလိုက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုဗီယက်ဟာ ကမ္ဘာမှာအဆင်ပြေဆုံးပါခင်ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လည်း ကလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ပြန်ရောဆိုပါတော့။အဲဒီအချိန်မှအတန်းထဲကကလေး
သမီးအဲဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖူးချင်လိုက်တာဆရာမရယ်... တဲ့ 😀
ကဲမောင်မျိုးရေ၊အချစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရီစရာလေး မရှိပေမယ့် ရီရမယ့်ဟာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဥမမယ် စာမမြောက် အတွေးများ ..
ကျိန်စာတွေလို ကန့်သတ်မှုတွေက တို့တွေပေါ်မှာဘာလို့ရှိနေရတာလဲ…။
ရှေ့ကသွားလေသူတွေရဲ့ သွေးချွေးတွေကို ဘယ်သူအားနာတတ်လဲ…။
ငါတို့ သွေးချွေးတွေရော ပေးဆပ်ဖို့ကျန်သေးလားကွာ။
အိမ်မက်ဆိုးကြီးရယ် ရုန်းထွက်နှိုးထခွင့်ပြုပါတော့ …။
ဒီလိုဆိုရင် စာရင်းဇယားတွေအောက်က အမှန်တရားကို ခဏလောက်ကြည့်ခွင့်ပြုပါ။
လူတွေ ကျွန်ခံယိုဆီးသွားဖို့ တော့မင်းတို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နော်။
မြို့တော်သစ်ကြီးရှိတာကို ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ဂုဏ်ယူရမှာလား…။
မျှော်လင့်စောင့်စားနေရတဲ့ စိတ်မရှည်မှုကို ကိုရီးယားကားတွေ နဲ့အစားပြန်ရကြေးတဲ့လား…။